जनकपुरधाम, २१ मंसिर । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सीके राउतलाई प्रहरीले जनकपुरधामबाट पक्राउ गरेको छ । निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरेको कारण प्रहरीले राउतलाई गिरफ्तार गरेको बुझिएको छ ।
डा. राउतले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक सञ्जालमार्फत् एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन बहिष्कारका लागि अपिल गरेका थिए ।
सादा पोशाकमा आएका नेपाली प्रहरीले बिहीबार बिहान ९.३० बजे माछा बजारस्थित भाडाको घरको मुख्य प्रवेश द्वारसँगै अर्को ढोका फुटाली राउतका बच्चासँग दुव्र्यवहार गर्दे डा. राउतलाई निवासबाट गिरफ्तार गरेको गठबन्धनले जनाएको छ ।
बिना कुनै सूचना, बिना सर्च वारंट, बिना गिरफ्तारी वारंटको उनको निवास को ताल्चा फुटाई, अनाधिकृत प्रवेश गरी उनको सहायक सत्यनारायण खंगलाई धम्काउँदै, घर को खनतलासी लिई, डा. राउतको निजी कम्प्यूटर, हार्ड ड्राइव, मोबाइल, खंगको मोबाइल कब्जामा लिई डा‘. राउतलाई गिरफ्तार गरेको गठबन्धनका सहसंयोजक कैलास महतोले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
गठबन्धनले राउतको रिहाईका लागि आग्रहसमेत गरेको छ । राउतलाई जनकपुरमै राखिएको छ ।